Yeka Ukumosha Isikhathi Futhi Wenze Iwili Manje Ukuze Uvikele Umndeni Wakho | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Yekani Ukuchitha Isikhathi Futhi YENZA ISITOLO Manje Ukuvikela Umndeni Wakho
Imvume kungenye yamadokhumenti abaluleke kakhulu owake wawenza empilweni yakho. Njengoba usebenze kanzima iminyaka, ukuqongelela impahla, ungafuna ukunika abathandekayo bakho ukulawula kwalezi zinto nempilo engcono uma ungasekho.
kwehlisa umthwalo wezezimali nokucindezela
Wills for Amafa UAE
Incwadi yefa iyasiza ukufeza lokhu. Uma ungakacabangi ngokubhala incwadi yakho yefa, kungakuhle ukuthi uqale ukucabanga ukukhuluma nommeli mayelana nokuyilungiselela kungekudala.
Incwadi yamafa inquma ukuthi izimpahla zizokwabiwa kanjani ekufeni komnikazi, ngoba lokhu kwehlisa umthwalo wezezimali kanye nengcindezi emndenini. Kufanele uqinisekise ukuthi incwadi yakho yefa isebenza ngokusemthethweni noma kungenjalo ngeke ibe nomthelela, futhi uzothathwa njengofele ngaphandle. Incwadi yamafa iyingxenye eyodwa nje yenqubo yonke yokuhlelwa kwezezakhiwo.
Nquma ukuthi iyiphi impahla okufanele uyihlanganise nentando yakho. Nquma ukuthi ngubani ozolidla ifa lakho. Khetha umgqugquzeli ozophatha impahla yakho. Khetha umqaphi wezingane zakho.
Kungani Ngidinga I-thato?
Ingxenye yokugcina yokuhlelelwa kwefa lakho kuyintando yakho, futhi kunezizathu ezintathu zokuthi kungani kufanele ube nokuqediwe futhi kuze kube yimanje kuzobhalwa phansi.
Okokuqala, intando yakho iyithuluzi elitshela abanye ukuthi ungathanda ukuthi impahla yakho isatshalaliswe kanjani ekufeni. Uma incwadi yemvume ingekho, amafa akho asatshalaliswa ngokuya ngefomula esemthethweni, kunokuba kube ngokwezifiso zakho ezibonakalayo. Ukuqinisekisa ukuthi abantu noma izikhungo onazo engqondweni uthola izimpahla ozihlukanisele zona, uzodinga usizo lommeli ukuze indawo yakho ethengiswayo ihlelwe kalula ngale ndlela oyifunayo.
Kubalulekile ukuba nentando ukuze abantu abasondelene nawe baqonde ukuthi ufuna izifiso zakho zenziwe kanjani. Ngokuthanda, unikeza izinkomba ezicacile mayelana nokusatshalaliswa kwempahla, unciphisa ukucindezeleka nokudideka ngesikhathi esivele sinzima kakhulu.
Okokugcina, okusebenzayo kuzoqinisekisa ukuthi umthwalo wezezimali emndenini wakho wehliswe kakhulu. Kodwa-ke, uma kungekho-kusebenza okuvumayo ekufeni, kuzosebenza umthetho wokubeletha. Kusho ukuthini lokhu ukuthi izimpahla zizosatshalaliswa ngokuya ngefomula esemthethweni, njengoba kushiwo ngenhla. Okomndeni wakho, kungaba yinkimbinkimbi ukulungiselela amadokhumenti nokwanelisa izidingo ezingokomthetho zokuphatha impahla ye-matate ngokuqhathaniswa nokwentando evumayo, okubuye kwandise izindleko zezimali kanye nomthwalo emndenini wakho.
Izinkantolo ze-UAE zizobambelela emthethweni weShararia
Kulabo abanempahla e-UAE kunesizathu esilula sokwenza intando. I-website ye-Government esemthethweni yase-Dubai ithi "Izinkantolo ze-UAE ziyohambisana nomthetho we-Sharia kunoma yisiphi isimo lapho kungekho khona intando khona".
Lokhu kusho ukuthi uma ufa ngaphandle kokuthanda noma ukuhlela indawo yakho, izinkantolo zendawo zizohlola indawo yakho futhi zisakaze ngokomthetho we-Sharia. Ngenkathi lokhu kungase kuzwakale kuhle, impumelelo yayo kungenzeka ukuthi ayikho. Zonke izinto zomuntu siqu zomuntu oshonile, kuhlanganise nama-akhawunti asebhange, zizocwiliswa kuze kube yilapho izikweletu zikhishwe.
Umfazi onabantwana uzofanelekela kuphela i-1 / 8th yefa, futhi ngaphandle kokufuna lokhu ukusatshalaliswa kuzosetshenziswa ngokuzenzakalelayo. Ngisho nezimpahla ezabiwe zizocwiliswa kuze kube yilapho inkinga yokwabiwa kwefa inqunywa izinkantolo zendawo. Ngokungafani nezinye iziphathimandla i-UAE ayisebenzisi 'ilungelo lokusinda' (impahla idluliselwa kumnikazi ohlangene osaphila ekufeni komunye).
Ngaphezu kwalokho lapho abanikazi bebhizinisi bekhathazeka khona, makube endaweni yehhala noma i-LLC, uma kwenzeka umnikazi wamasheya noma ukufa komqondisi, imithetho ye-probate yendawo isebenza futhi ukwabelana akudluli ngokuzenzakalela ngokusinda noma ilunga lomndeni lingayithatha indawo. Kukhona nezindaba eziphathelene nokugcinwa kwezingane ezifelwe.
Kuwukuhlakanipha ukuba nenhloso yokuvikela izimpahla zakho nezingane futhi ulungele namuhla konke okungenzeka futhi kwenzeke kusasa.
Kwenzekani lapho kungekho-intando ngemuva kokufa?
Uma umuntu efa ngaphandle kokwenza umyolelo, baziwa ngokuthi yi-matate, futhi ifa labo liyoxazululwa ngemithetho yombuso echaza ukuthi yiliphi ifa eliya kubani. Kunenqubo engokomthetho yokudlulisela impahla yomufi izindlalifa ezilungile, ezibizwa ngokuthi yi-probate.
Njengoba kungakabikwa muntu obulala umuntu, umphathi uqokwa yijaji ukuba lisebenze kuleso sikhundla. Uma incwadi yefa ithathwe njengengasebenzi, umlawuli kufanele aqanjwe. Ukuze intando ifaneleke ngokusemthethweni, kufanele ihlangabezane namazinga athile. Noma kunjalo, izidingo ziyahlukahluka kuye ngesimo.
Umphathi uvame ukuba ngumfokazi, futhi noma ngabe ungubani, uzoboshwa yimithetho ye-state yesifunda sakho. Ngakho-ke, umphathi angenza izinqumo ezingeke zibe ezifisweni zakho noma ezifisweni zakho.
Ngabe Kufanele Ngibe Nentando Ehlanganayo Nomngane Wami Womshado Noma Sine-Will Ehlukile Ehlukile?
Abahleli bezindlu eziningi abazeluleki ama-will ahlanganyelwe, futhi kwezinye izifundazwe, nawo awaziwa. Okungahambi kahle nguwe, owakwakho ngeke afe ngasikhathi sinye, futhi kungenzeka kube nezindawo ezingabanjwanga ngokuhlanganyela. Ngakho-ke ukwahlukana kuyozwakala kunengqondo, noma ngabe intando yakho neyomngane wakho womshado ingagcina ibukeka ifana kakhulu.
Ikakhulu, izifiso ezihlukile zivumela umlingani ngamunye ukuthi abhekane nezinkinga ezinjengabashadikazi bokuqala kanye nezingane ebudlelwaneni obudlule. Lokhu kuyafana nangempahla etholwe kumshado owedlule. Kufanele ucace ukuthi ngubani othola ini. Kodwa-ke, imithetho ye-probate ithande kakhulu lowo oshade naye manje.
Abahlomulayo kumfa yilabo abaqanjwe ngamagama noma izinhlangano ezinikela abazothola amafa noma ifa lomuntu oshonile. Lo mthetho uyokhomba futhi uchaze ukuthi abazuzi abahlosiwe bangobani nokuthi yiliphi ifa abazolithola.
Ozuzayo kufanele azi ukuthi aqokwe njengezindlalifa kumafa, kanye nefa eligcwele alimiselwe lona. Kodwa-ke, ozuzayo angathola kuphela, ahlombe, noma abuke ifa labo ngemuva kokuthi umabi wezezimali enze isicelo ngempumelelo sobunikazi bezimpahla ezidluliselwe kulowo ozuzayo.
Ngubani i -aji (i-Executrix)?
Umuntu okhipha imali ngumuntu ophatha yonke imisebenzi yokuphatha nemisebenzi ekuqinisekiseni ukuthi izifiso zomhloli zilandelwa ngokuhambisana nentando. Lo muntu uhlikihla impahla lapho kufa umhloli, akhokha noma iyiphi intela okufanele ayifune, bese efaka isicelo se-probate. Kungahle kube nabakhwetha abane ku-thato yakho, futhi bangaba abazuzi befa.
Kubalulekile ukuthi uqoke umuntu onokwethenjwa njengomphathizimali ngoba yibo okumele balandele imiyalo njengoba kuchaziwe emugqeni. Lapho usunqume kumuntu okhipha imali, uzoqopha amagama abo aphelele kanye nekheli ngentando yakho. Umabi wefa kufanele abonakale futhi athintane lapho kudingeka ukwenza imisebenzi yakhe.
Ngabe Ufuna Yini Ukuvuselelwa?
Kungenzeka ukuthi awusoze wabuyekeza intando yakho, noma ungakhetha ukuvuselela njalo. Lesi sinqumo sikini kuwe. Kodwa-ke, khumbula, okuwukuphela kwenguqulo yentando yakho ebaluleke kunazo zonke esikhona ngesikhathi sokufa.
Unalokho engqondweni, ungahle ufise ukuphinda uvakashele intando yakho ngezikhathi lapho izinguquko ezinkulu zempilo zenzeka. Lokhu kufaka phakathi izikhathi ezibaluleke kakhulu njengesehlukaniso, ukuzalwa kwengane, ekufeni kothola umzuzi noma umabi wefa, ukuthengwa okubalulekile noma ifa, nokunye. Futhi, njengoba izingane zakho ziba ngabantu abadala, ngeke kungenangqondo ukuthi kube nalabo abagadli ababizwa ngegama ku-thato, yize abanakekeli bengabizwa ngabondli abakhubazekile.
Ubani Onelungelo Lokunqoba Intando Yami?
Ukungenela umugqa wezwe kusho ukuphonsela inselelo okusemthethweni noma konke noma izingxenye zedokhumenti. Ozuzayo ozizwa enephuze ngokwemibandela ye-tando angaqoka ukukungenela umncintiswano. Lokhu kuyefana kumuntu oshade naye, noma owashade naye, noma ingane okholelwa ukuthi izifiso ezishiwo zingqubuzana nemithetho yendawo.
Imvume ingaqhudelana ngezizathu ezahlukahlukene:
Uma kungafakazwanga kahle
Ukube ubungakwazi lapho usayina.
Noma isayinwe ngenxa yokuphoqelela noma inkohliso.
Ijaji yilona elizolungisa ingxabano. Isihluthulelo sokunqoba ngempumelelo ifa yilapho kunamaphutha asemthethweni atholakala kuso. Ukuzivikela okuhle kakhulu, nokho, kuyitayitela elicaciswe kahle futhi elethwe ngokusemthethweni.
Vikela abathandekayo bakho ngentando ebophayo esemthethweni.
Khetha umqaphi wezingane zakho.